Radio Don Bosco - Nanasitrana olona maro i Jesoa ary nampitombo ny mofo
Vahoaka marobe no manaraka an’i Jesoa, vahoaka noana sy mangetaheta, indrindra ny famonjena izay nandrasany hatry ny ela. Malahelo i Jesoa mahita ireo : dia izay ilay fon’Andriamanitra mitempo, mangoraka, tsy mahajery fotsiny ny fahorian’ny olombelona fa avy mamonjy azy malaky. Fa mba hahafahan’Andiamanitra mamonjy dia tsy maintsy mangetaheta aloha ny olona, maniry fatratra, satria tsy atao an-terisetra ny finoana fa atolotra an-kalalahana. Ny famantarana voalohany fa tonga ny Mesia dia resy ny ratsy.
Nampitombo mofo i Jesoa noho ny fahatsapany ny hanoanan’ny vahoaka nanaraka azy. Mofo avy amin’ny olona no nalaina, nomena an’i Jesoa hampitomboiny, satria mila mandray anjara amin’ny famonjena antsika iska fa tsy zaza toloram-potsiny. Nihinnana ny olona rehetra ka voky, ary mbola nisy ambiny, mitory ny haben’ny fitiavan’Andriamanitra, ny habetsahan’ny fanomezany, ampy anaranam-po. Santatr’ilay fanasana any an-danitra izany.